Pros and Cons of Contact Lens - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မကျြကပျမှနျလေးတှကေ မကျြလုံးရဲ့အလှအပကို ပိုမိုဝငျးလကျစပေါတယျ။
အရောငျအသှေးစုံ၊ ဒီဇိုငျးစုံတဲ့ မကျြကပျမှနျလေးတှကေ အလုံးစုံကောငျးတာလား?
– မကျြကပျမှနျတပျထားမယျဆိုရငျ မကျြမှနျတပျသလို နှာခေါငျးပျေါမှာလေးနတော၊မြိုးမရှိပါဘူး။
– ရောငျစုံ၊ ဒီဇိုငျးစုံရှိတော့ မကျြဝနျးအလှပိုတာပေါ့နျော။
– မကျြမှနျလိုဘောငျထဲကွညျ့ ရတာမဟုတျလို့ ပိုပွီး ကွညျ့လို့ကောငျးပါတယျ။
– မကျြမှနျလို အပူအအေးမမြှတဲ့အခါ ရငှေပြေံ့မှာမြိုးမပူရပါဘူး။
– ကားမောငျးတဲ့ အခြိနျဆိုရငျ မကျြကပျမှနျက ပိုကွညျ့လို့ကောငျးပါတယျ။
– အားကစားလှုပျတဲ့အခါ။ လှုပျရှားကစားတဲ့အခါ မကျြမှနျလိုပွုတျကမြှာမြိုးမပူရပါဘူး။မကောငျးတဲ့ဘကျကဆိုရငျတော့
– မကျြကပျမှနျ တပျဆငျဖို့ အစဉျသနျ့ရှငျးနဖေို့လိုပါတယျ။ ဒါမှသာ မကျြလုံးပိုးမဝငျမှာဖွဈပါတယျ။ခရီးသှားတဲ့အခါမြိုးမှာတော့ မကျြကပျမှနျသနျ့စငျဖို့ဆေးကွောရတာက အလုပျတဈခုလိုတော့ ဖွဈနမှောပါ။
– ကာငျးစှာ သနျ့စငျမထားတဲ့မကျြကပျမှနျတပျမိပွနျရငျလညျး မကျြသားပိုးဝငျနိုငျခွရှေိပါတယျ။မကျြသားပျေါမှာ ယားယံခွငျး၊ နီမွနျးခွငျးဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
– မကျြကပျမှနျလေးတှကေ အလှနျနူးညံ့တာကွောငျ့ မကျြမှနျထကျစာရငျ ပကြိစီး ၊ ပြောကျဆုံးနိုငျခွပေိုမြားပါတယျ။
– တဈခြို့ မကျြကပျမှနျတပျလို့ မနတေတျပါဘူးဆိုတဲ့လူတှလေညျး ရှိနိုငျပါတယျ။
– မကျြကပျမှနျက မကျြသားကိုခွောကျစပေါတယျ။ မကျြသားဆီကို Oxygen မရောကျအောငျတားထားသလိုဖွဈစတောကွောငျ့ ရရှေညျမှာတော့ မကျြလုံးထိခိုကျနိုငျပါတယျ။
– မကျြကပျမှနျ တပျတဲ့လူဟာ ဓာတျမတညျ့တတျတဲ့လူဖွဈပါက တခြို့ရာသီဥတုတှမှော မကျြကပျမှနျတပျဖို့အဆငျမပွနေိုငျပါဘူး။
– ဘယျအခြိနျဖွဈဖွဈ အရမျးပငျပနျးပွီးအိပျခငျြနရေငျတောငျ မကျြကပျမှနျခြှတျအိပျဖို့ အမွဲသတိထားရပါလိမျ့မယျ။ဒါဆျု မကျြကပျမှနျကိုယျနဲ့ ကိုကျ၏။ မကိုကျ၏။ စဉျးစားနိုငျမယျထငျပါတယျ။
မျက်ကပ်မှန်လေးတွေက မျက်လုံးရဲ့အလှအပကို ပိုမိုဝင်းလက်စေပါတယ်။
အရောင်အသွေးစုံ၊ ဒီဇိုင်းစုံတဲ့ မျက်ကပ်မှန်လေးတွေက အလုံးစုံကောင်းတာလား?
– မျက်ကပ်မှန်တပ်ထားမယ်ဆိုရင် မျက်မှန်တပ်သလို နှာခေါင်းပေါ်မှာလေးနေတာ၊မျိုးမရှိပါဘူး။
– ရောင်စုံ၊ ဒီဇိုင်းစုံရှိတော့ မျက်ဝန်းအလှပိုတာပေါ့နော်။
– မျက်မှန်လိုဘောင်ထဲကြည့် ရတာမဟုတ်လို့ ပိုပြီး ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။
– မျက်မှန်လို အပူအအေးမမျှတဲ့အခါ ရေငွေ့ပျံမှာမျိုးမပူရပါဘူး။
– ကားမောင်းတဲ့ အချိန်ဆိုရင် မျက်ကပ်မှန်က ပိုကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။
– အားကစားလှုပ်တဲ့အခါ။ လှုပ်ရှားကစားတဲ့အခါ မျက်မှန်လိုပြုတ်ကျမှာမျိုးမပူရပါဘူး။မကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုရင်တော့
– မျက်ကပ်မှန် တပ်ဆင်ဖို့ အစဉ်သန့်ရှင်းနေဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ မျက်လုံးပိုးမဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ မျက်ကပ်မှန်သန့်စင်ဖို့ဆေးကြောရတာက အလုပ်တစ်ခုလိုတော့ ဖြစ်နေမှာပါ။
– ကာင်းစွာ သန့်စင်မထားတဲ့မျက်ကပ်မှန်တပ်မိပြန်ရင်လည်း မျက်သားပိုးဝင်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။မျက်သားပေါ်မှာ ယားယံခြင်း၊ နီမြန်းခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
– မျက်ကပ်မှန်လေးတွေက အလွန်နူးညံ့တာကြောင့် မျက်မှန်ထက်စာရင် ပျကိစီး ၊ ပျောက်ဆုံးနိုင်ခြေပိုများပါတယ်။
– တစ်ချို့ မျက်ကပ်မှန်တပ်လို့ မနေတတ်ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
– မျက်ကပ်မှန်က မျက်သားကိုခြောက်စေပါတယ်။ မျက်သားဆီကို Oxygen မရောက်အောင်တားထားသလိုဖြစ်စေတာကြောင့် ရေရှည်မှာတော့ မျက်လုံးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
– မျက်ကပ်မှန် တပ်တဲ့လူဟာ ဓာတ်မတည့်တတ်တဲ့လူဖြစ်ပါက တချို့ရာသီဥတုတွေမှာ မျက်ကပ်မှန်တပ်ဖို့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။
– ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် အရမ်းပင်ပန်းပြီးအိပ်ချင်နေရင်တောင် မျက်ကပ်မှန်ချွတ်အိပ်ဖို့ အမြဲသတိထားရပါလိမ့်မယ်။ဒါဆ်ု မျက်ကပ်မှန်ကိုယ်နဲ့ ကိုက်၏။ မကိုက်၏။ စဉ်းစားနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
Lactational Amenorrhoea and Contraception